Ololo Balaadhan Oo dhanka Nadaafada Ah Oo Kadhacday Degmada Qalaafo - Cakaara News
Ololo Balaadhan Oo dhanka Nadaafada Ah Oo Kadhacday Degmada Qalaafo
Qalaafo(cakaaranews)khamiis 20ka April 2017.Ololo balaadhan oo ay isugu soo baxeen bulshada qaybaheeda kala duwan ee kudhaqan xaafadaha degmada qalaafo ee gobolka shabeele islamarkaana lagu nadaafinayo magaalada ayaa maanta kabilowday magaalada qalaafo.
Hadaba, ololahan nadaafada ayaa waxaa kawarbixiyay Gudoomiyaha Degmada Qalaafo mudane Maxamed Khadar Faarax oo sheegay in saaka ololo balaadhan lagu qaaday nadaafada magaalada qalaafe iyadoo ay ololahan ay siwada jira ah uga qaybqaateen shacabka qaybahiisa kaladuwan iyo waliba maamulka degmada oo iskuduuban. Gudoomiayaha oo hadalkiisa sii wata ayaa xusay in nadaafadu ay tahay imaanka badhkeeda isamarkaana nadaafad daradu ay keento xanuuno xunxun oo uu ugu horeeyo shubanka iyo wixii lahalmaala. Wuxuuna carabka kudhuftay in ololahani uu yahay mid joogta ah islamarkaana ay rajanayaan in uu wax-wayn katari doono dhanka kahortaga xanuunada iyo waliba bilicda magaalada qalaafo.
Ugudanbayna, dhankooda bulshadii kaqaybqaadanaysay ololahan nadaafada ayaa sheegay in ay aad ugu faraxsan yihiin in si wada jir ah uga shaqeeyaan nadaafada magaaladooda iyo xaafadahooda islamarkaana ay si kagnaansho iyo wadaniyadi kudeehantahay ay uga qaybqaadanayaan.